Fanlyplas-ပလတ်စတစ်ဖလင်နှင့်စာရွက် extrusion လိုင်းဖြေရှင်းချက်ကိုရည်စူးသည်
FANLYPLAS SHANGHAI ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဆယ်စုနှစ်များစွာကုန်ထုတ်လုပ်မှုမူရင်း၊ Fanlyplas high-end၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ တည်ငြိမ်သောပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်၊ စာရွက်နှင့်ပရိုဖိုင်ထုတ်ယူခြင်းလိုင်းတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
လောကီသားတို့သည်အမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် FANLYPLAS extrusion နည်းပညာ!
Fanlyplas-ပလတ်စတစ်ဖလင်နှင့်စာရွက် extrusion လိုင်းဖြေရှင်းချက်ကိုရည်စူးသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသော AZ ၀ န်ဆောင်မှု Fanlyplas Plastic sheet၊ foil profile extrusion line တွင်သင့်အားပြည့်စုံသော package solution ကိုပေးနိုင်သည်။
Fanlyplasအတွက်တည်ရှိသည် Shanghai၊ တရုတ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံကျော်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်တွင်တက်ကြွလာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံစက်ရုံသည်စတုရန်းမီတာ ၆၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၅ သန်းနှင့်ပလပ်စတစ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုအထူးပြုသည်။
ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၆ ဝကျော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
၎င်း၏တည်ထောင်မှုမှလွန်ခဲ့သော ၁၆ နှစ်ကကုမ္ပဏီသည်အထူးသဖြင့်အမြှုပ်ထွက်ပစ္စည်းများတွင်စာရွက်နှင့်ရုပ်ရှင် extrusion line တွင်ရှိသည်။
PVC Edge Banding Extrusion လိုင်း
PVC Ceiling Panel Extrusion လိုင်း
PP/PE WPC decking Extrusion လိုင်း
PVC WPC တံခါးဘောင် Extrusion လိုင်း
PVC အခမဲ့အမြှုပ်စာရွက် extrusion လိုင်း
PVC/WPC ရေမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ Extrusion လိုင်း
SPC အခင်းစာရွက် extrusion လိုင်း
PVC စကျင်ကျောက်စာရွက် extrusion လိုင်း
Fanlyplas-Your Plastic Extrusion solution အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်ရလဒ်များရရှိရန်ရွေးချယ်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည်အတွင်းအပြင်နှင့်အပြင်ပန်းအလှဆင်ဧရိယာများတွင်သုံးသောပလပ်စတစ်စာရွက်၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ပရိုဖိုင်းများ၊ အဆောက်အ ဦး ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ ဆိုင်းဘုတ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ အထုပ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့်အဆင့်မြင့် optical ထုတ်ကုန်များ၊ အနိမ့်အလေးချိန်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောခွန်အားထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။
ဘာလဲစူးစမ်း Fanlyplas ပေးကမ်း
ပရောဂျက်၏ဖြစ်နိုင်ချေကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ နေရာရွေးချယ်ခြင်း၊ စကေး၊ စက်ရုံဒီဇိုင်းစသည်
ပရောဂျက်အရ ၀ ယ်သူသည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လက်ခံသည်အထိအရည်အသွေးမြင့်စက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်
ဖောက်သည်၏ ၀ န်ထမ်းများအတွက်စက်လည်ပတ်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းစသည့်လေ့ကျင့်မှုပေးပါ။
၀ ယ်သူများအား“ အရည်အသွေးမြင့်၊ မြန်ဆန်၊ စိတ်ကြိုက်” ရာသက်ပန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
ဖောက်သည်များအားအသင့်တော်ဆုံးစက်ရုံစီမံကိန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ရန် ၀ ယ်သူလိုအပ်ချက်များကိုဖယ်ရှားပါ။
ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများနှင့်ဖော်မြူလာများကိုကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ
နောက်ဆုံး Blog & ဆောင်းပါးများ
PE/PP ပြင်ပ WPC စက်ယန္တရား/စက်ပစ္စည်းများ/ထုတ်ယူခြင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
မာတိကာ WPC ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်၏အားသာချက်များ WPC ပစ္စည်းစျေးကွက်အလားအလာ WPC ၏လျှောက်လွှာ WPC အပြင်ပန်းပစ္စည်း WPC ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
ဆဲလ်များကွဲအက်စေသောအကြောင်းအရင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်း PVC အရေခွံမြှုပ်ဘုတ်ပြား
မြှုပ်ထားသောပလပ်စတစ်စာရွက်၏အပိုင်းဖြတ်တောက်ထားသောသို့မဟုတ်ထိုးဖောက်ထားသောဆဲလ်များရှိသည်။ သီအိုရီတွင်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ရှိသည်၊ ပထမအချက်မှာအရည်ပျော်မှု၏ပြည်တွင်းအင်အားသည်အလွန်အားသာသောကြောင့်ဖြစ်သည်
တောင့်တင်းမှု၏အခြေခံမူနှင့်အသုံးချမှု PVC အမြှုပ်ပလတ်စတစ်
Foam ပလပ်စတစ်သည်အစိုင်အခဲပလပ်စတစ်တွင်ဓာတ်ငွေ့ micropores များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပိုလီမာပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလင်းအလေးချိန်၊ အပူလျှပ်ကာမှု၊ အသံ
Six Common Sense of ခြောက်မျိုး PVC မြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်ယူခြင်း
လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ထူးခြားချက်များ PVC အမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်အကြမ်းအားဖြင့်သစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ အလွန်မြင့်မားသောအလုပ်လုပ်အပူချိန်ကြောင့်လောင်မြိုက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သာလိုအပ်သည်။ ၌
Extrusion ဖြေရှင်းချက်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုယနေ့ရယူပါ
ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှကြားချင်ပါတယ်ချင်ပါတယ်! ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို message ပို့ပါ၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှကြားချင်ပါတယ်ချင်ပါတယ်! အောက်ပါပုံစံကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို message ပို့ပါ။
ရုပ်ရှင်၊ စာရွက် extrusion လိုင်း
မဟုတ်ဘူး။ ၂၈၊ Moyu လမ်း၊ Jiading ခရိုင်၊ Shanghai, တရုတ်
：+ 86 ၂၁ ၆၉၈၉၅၉၉၅
FANLYPLAS ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည် FANLYPLAS SHANGHAI ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အစာရှောင်ခြင်း site ကိုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အလိုအလျောက်စာမျက်နှာမြန်နှုန်း optimization